Пишется или пишеться — как правильно, почему? | Полезная информация для всех
Written သို့မဟုတ်ရေးသားမှု - ဘယ်လိုရန်, ဘာကြောင့်လဲ
အဆိုပါစကားလုံး quote; Pishetsyaquot, ဒါဟာပျော့နိမိတ်လက္ခဏာမရှိပဲကျမ်းစာ၌ရေးထားရပါမည်။ ဒါဟာစကားလုံးဖြေကြားထားတဲ့အပေါ်မည်သည့်မေးခွန်းပါလျှင်စစ်ဆေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဘယ်အရာကို (အဆုံးမှာအဘယ်သူမျှမပျော့နိမိတ်လက္ခဏာလည်းရှိ၏) ပေထိုအဖြေကိုတစ်ခုဖြစ်သည်: ငါဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမေးဖို့ဒါဟာရေးသားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ပျော့ပျောင်းသောနိမိတ်လက္ခဏာကိုတင်ထားရန်မလိုအပ်ပါဘူး။
Задайте вопрос: что делаЕТ?(без мягкого знака)значит — ПишеТСЯ. Что делаТЬ? — ПисаТЬСЯ!
Еще примеры: Что делаЕТ? — ИграеТСЯ. Что делаТЬ — ИграТЬСЯ.
Что делаЕТ? — ПоднимаеТСЯ. Что делаТЬ? — ПоднимаТЬСЯ.
(အဘယျသို့စေသည်?) ရေးသား? မစုံလင်ကြိယာ။
လမ်းဒီကိစ္စကိုအတွက်ပျော့နိမိတ်လက္ခဏာစကားလုံး quote ထဲမှာထို့ကြောင့်မျှမက, pishetsyaquot; ပျော့ပျောင်းသောနိမိတ်လက္ခဏာတိကျမ်းစာ၌လာသည်မရသင့်ပါတယ်။ နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကို Quote နှင့်အတူစာလုံးပေါင်းဖြစ်ပါတယ်ရေးထား; quote; ဒါဟာစာလုံးပေါင်းမှားနေပါတယ်။
Правильно — пишется.
မည်သည့်ကြိယာရေးသားခြင်းမပြုမီ, ငါအများအားဖြင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမေးခွန်းမေးဖို့: ဘာလုပ်သနည်း သို့မဟုတ်အဘယ်သို့ပြုသနည်း မေးခွန်းကဘာလဲ, ဤ (လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပျော့သို့မဟုတ်လက်မှတ်မထိုးနှင့်အတူ) အဖြေတစ်ခုဖြစ်ရပါမည်။
В данном случае задаю вопрос — слово пишется (что слово делает? — без мягкого знака), значит этот глагол я напишу без мягкого знака.
ယခုတွင်ငါသည်အောက်မေ့သတိရသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းမှကြောင့်တစ်ဦးစကားလုံးရေးသားခြင်းမပြုမီ, သငျသညျစစျဆေးဖို့လိုအပ်ဒါကပြောသည်။ ဒါနှုပျော့နိမိတ်လက္ခဏာမရှိပဲစာလုံးပေါင်းနှင့်အဘယ်သို့ပြုရမည်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုပြန်ပြောသလဲ? Written ။ ထိုအခါစကားလုံးများ၏အဆုံး၌အဘယ်သူမျှမပျော့နိမိတ်လက္ခဏာတိကျမ်းစာ၌လာသည်ကား, အဲဒီနောက်စကားလုံးကတော့ပျော့နိမိတ်လက္ခဏာမရှိပဲစာလုံးပေါင်းဖြစ်ပါတယ်။
Кроме официального метода поставить вопрос, есть ещ и простой народный. Попробуйте сказать то же слово без -ся на конце и посмотрите, что у Вас получится, причм обращайте внимание на ударение — вот как слово звучит, так и произнесите, только без -ся.
Можно сказать по русски quot;полУчитquot;? Можно, значит есть и quot;полУчитсяquot;. Можно сказать quot;полУчитЬquot;? Нельзя. А как можно? — quot;ПолучИтЬquot;. Вот и ответ про то, где что можно.
ကျနော်တို့ပြောပါသို့မဟုတ် Russian quote ထဲမှာရေးလိုက်နိုင်ပါတယ်; pishetquot;? အဘယ်သူမျှမကသင်သည်မဟုတ်နိုင်။ ဤတွင်နှင့် quote; pishetsyaquot; မရေးနိုငျသညျ။
Правило постановки вопроса к глаголу, естественно, остатся в силе. И думать, думать, думать — прежде чем писать!
အဘယ်အရာကို Quote စေသည်;; ငါဆရာစာလုံးပေါင်းစကားလုံးများကိုအကြောင်းကိုသံသယ၌, ကြိယာ Quote ဖို့မေးခွန်းတစ်ခုထားလျှင်, ယေဘုယျအားဖြင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာအလွယ်ကူဆုံးအရာဖြစ်၏ကရှင်းပြသည်မှတ်မိ -? ဖြေ quote; pishetquot; ။ ဒီကိစ္စကို၏အဆုံးအဘယ်သူမျှမပျော့နိမိတ်လက္ခဏာမှာ, ထို့နောက်ပျော့နိမိတ်လက္ခဏာမရှိပဲ, လွန်းသည်စကားလုံးရေးရန်
ငါသညျဤအမှု၌ ACE ပါဘူး, ဒါပေမယ့်ဒီစည်းမျဉ်းအစဉ်မပြတ်ငါမှတ်မိသေးတယ်။ သငျသညျထိုကဲ့သို့သောအကြပ်အတည်းပေါ်တဲ့အခါ, သင်ရုံဘာလုပ်ရမှန်းမေးခွန်းကိုမေးနေတာပါလား? ငါတို့မြင်သည်အတိုင်း, ပြဿနာထို့နောက်ရေးသူ့ကိုမပါဘဲတိကျမ်းစာ၌လာသည်ကားပျော့နိမိတ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ ထိုအဘယ်သို့ပြုရမည်မေးခွန်းတစ်ခုရှိလြှငျ? ဥပမာအားဖြင့်, ယားယံခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီမှာပျော့နိမိတ်လက္ခဏာအရေးအသား။
မေးခွန်းရဲ့အဖြေပါလျှင် အဘယ်သို့ပြုသနည်း , သင့်အနေဖြင့်ပျော့နိမိတ်လက္ခဏာမရှိဘဲရေးသားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်မေးခွန်းပါလျှင်အဖြေ အဘယ်သို့ပြုသနည်း ထိုအခါထိုစကားသင်ပျော့နိမိတ်လက္ခဏာကိုရေးသားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အဲဒါကိုအမြဲအမှားအယွင်းများခြင်းမရှိဘဲအလုပ်လုပ်တယ်, မေးခွန်းတစ်ခုလွယ်ကူသောအုပ်ချုပ်မှုကိုမှတ်မိဖို့လိုအပ်ပေသည်။
ကျနော်တို့ကြိယာမှမေးခွန်းများမေး: အဘယျသို့သနည်း သို့မဟုတ်ဘာလုပ်သနည်း ဒီအပေါ်အခြေခံပြီး, ငါတို့နှင့်အတူသို့မဟုတ်ခမရှိဘဲကြိယာရေးပါ။
ကျနော်တို့ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်စကားလုံးမှဒီနည်းလမ်းကိုလျှောက်ထား: အဘယ်အရာကိုသနည်း စာဖြင့်ရေးသား.
ဥပမာအားဖြင့်။ ဤသည်မှာစကားလုံး (အဘယ်အရာကိုမ?) မှန်ကန်စွာပျော့နိမိတ်လက္ခဏာမရှိပဲရေးသားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
ဤသည်မှာစကားလုံးမှန်မှန်ကန်ကန်ရေးပါရန် (ဘာလုပ်ရမှန်း?) ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
61 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,459 စက္ကန့်ကျော် Generate ။